Nhema tourmaline - Iyo crystalline boron silicate maminera - vhidhiyo
Tags nhema, Black tourmaline, Tourmaline
Raw dema tourmaline kristaro ibwe rinoreva.
Tenga yakasviba vatema tourmaline mudura redu
Nhema tourmaline ndeye crystalline boron silicate maminera. Zvimwe zvinoteedzera zvinhu zviri aluminium, iron, uye magnesium, sodium, lithium, kana potasium. Tourmaline inorondedzerwa sedombo-rinokosha-dombo uye dombo rinouya mumarudzi akasiyana siyana. Maererano neMadras Tamil Lexicon, zita racho rinobva pazwi reSinhalese "thoramalli", boka rematombo anokosha anowanikwa muSri Lanka. Sekureva sosi imwecheteyo, iyo Tamil "tuvara-malli" inobva kuSinhalese mudzi wezwi. Iyi etymology inouyawo kubva kune mamwe maduramazwi akajairika anosanganisira Oxford English Dictionary.
Nhema tourmaline nhoroondo
Mifananidzo yakajeka Sri Lankan gem tourmalines yakaunzwa kuEurope. Muhuwandu hwakawanda neDutch East India Kambani. Kugutsa chinodikanwa chekuda kuziva uye nematombo. Panguva iyoyo, isu hatina kuziva kuti schorl uye zvakare tourmaline yaive yakafanana mineral. Paingova nezve 1703 chete apo zvakaonekwa kuti mamwe mavara ane mavara aive asiri zirconi. Tourmaline dzimwe nguva yaidaidzwa kuti Magineti eCeylonese, nekuti inogona kukwezva yozodzosera madota anopisa nekuda kweayo mapuroelectric zvivakwa.
Tourmaline ine mavara akasiyana-siyana. Kazhinji, hutori-rich rich tourmalines hwakasvibira kune bluish-yakasviba kusvika kune yakasvibira, asi michero yemagesisi yakawanda yakasvibirira kuva yero, uye tourumini yakawanda yeitimuum inenge yakangoita chero ruvara: bhuruu, ruvara, ruvara, ruvara, ruvara, nezvimwewo. Kazhinji, hazvina ruvara. Bhi-mavara nemakristasi akawanda akajairika, zvichiratidza kusiyana kwehuwandu hwemakemikari munguva yekristalllization. Mvere dzinogona kunge dzakasvibirira pamucheto mumwe chete uyewo pini pane imwe. Kana kuti ruvara rwekunze nekunze mukati. Iyi ndiyo mavhodelon tourmaline. Mamwe mavara e tourmalines ndea dichroic, mune kuti anoshandura ruvara kana achionekwa kubva kune zvakasiyana-siyana.
Granite, pegmatites uye mumatombo emametorphic ndiwo maitiro anowanzoitwa kuti awane, schist uye marble.
Takawana Schorl uye lithium-rich tourmalines mu granite uyewo granite pegmatite. Schists uye marble zvinowanzotarisirwa bedzi zvirongwa zve magnesium-rich rich tourmalines uye dravites. Iyo inogara yakasimba mineral. Tinogona kuzviwana mumaduku maduku sezviyo mu sandstone uye conglomerate.
Raw dema tourmaline kristaro ibwe rinoreva uye kuporesa zvivakwa zvinobatsira
Nhema tourmaline inogona kushandiswa kune zvese kudzora uye kudzivirira kubva mukusavimbika. Izvo zvakanaka zvekudzora simba remwaranzi. Inowedzera hutano hwemuviri nekupa kuwedzera kwehutano hwepanyama, kugadzikana kwepfungwa, uye huchenjeri hwepfungwa.
Chii chakasviba tourmaline chakanakira?
Imwe yeakasimba pasi pasi, kuchenesa, uye matombo ekudzivirira. Dzivisa kusagadzikana, chengetedza pamatanho ese. Iri dombo rinonyanya kubatsira kune vanhu vari kusangana nematanho epamusoro ekunetseka chero kupi muhupenyu hwavo.
Ndiani anogona kupfeka dema tourmaline?
Iko kristaro inogona chaizvo kupfekwa nemunhu wese. Inogona kunyanya kupfekedzwa nevanokwira veLibra neCapricorn. Inogona zvakare kuchengetwa munzvimbo dzaunogara kunge imba kana nzvimbo yako yebasa sezvo ichitora kusagadzikana.
Unoisa kupi nhema dema?
Kuchenesa uye kuchengetedza, ibwe rakanakira mukova wemba yako. Isa iri pakoni, hwindo kana pasherufu padyo nemusuwo. Wedzera chidimbu chejade kuti ugamuchire muhupfumi uye nerombo rakanaka.
Unoshandisa sei dema tourmaline kudzivirira?
Isa kristaro padyo nemubhedha wako kana pakona yemukamuri, kuitira kuchengetedzwa kwakakwidziridzwa iwe nenzvimbo yako. Takura uende nayo muhomwe yako kuti uwedzere kuchengetedzwa uri paruzhinji kana kubasa. Pfeka zvishongo zvine dombo iri mukati, senge rundarira kana chishongo.
Unogona kupfeka dema tourmaline mazuva ese?
Nechiyero pakati pe7 ne7.5 pachiyero cheMohs chekuoma kwemaminerari, zvishongo zveturmaline zvinogona kupfekwa mazuva ese, asi nekuchenjerera. Mhete uye pendende zvinogara zvakachengeteka sarudzo kana iwe uchida kupfeka tourmaline zvishongo zuva rega rega.
Tenga zvakasikwa dema tourmaline mune yedu gem shopu
Nyeredzi nyeredzi moonstone
Tags nhema, Nyeredzi nhema, Moonstone, nyeredzi
Tags Girinhi, Tourmaline, verdelite
Tags Schorl, Tourmaline
Tags Indicolite, Tourmaline
20% Discount pamwedzi.
* inowanikwa kusvika Kubvumbi 30, 2021